Saxaafada Putland Oo joojisay Baahinta Wararka Madaxweyne Gaas | Berberatoday.com
Saxaafada Putland Oo joojisay Baahinta Wararka Madaxweyne Gaas
June 28, 2016 - Written by Berbera Today
Garoowe(Berberatoday.com)-Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamad Cali Gaas oo shalay dib ugu noqdey magaalo madaxda Puntland ee Garowe ayaa gabi ahaan saxaafada ka howlgasha magaalo madaxda qaadacdey in ay kaga hortagto garoonka diyaaradaha islamarkaana kasoo tabiso shirkii jaraa’id uu ku qaban jirey xarunta madaxtooyada.
Qaadacaada saxaafada ayaa timid kadib iyagoo cabasho ka muujinaya hab dhaqankii Wasiirka warfaafinta Puntland iyo xadhiga aan loo meel dayin ee loo gaystey Idaacada Daljir xarumaheeda magaalada Garowe, Galkacayo iyo Bossaso.
Xafiiska madaxtooyada Puntland iyo talefishinka dowlada ayaa Wararka soo gaadhey saxaafada ka yimaadeen faafintooda iyadoo wararka sheegayaan in Madaxweyne Gaas qorsheynayo inuu kulan la qaato maalmaha soo socda ururka saxafiyiinta Puntland.
Wasiirka warfaafinta Puntland ayaa aflagaado, hanjabaad iyo Dastuur jabin u gaystey saxaafada Puntland isagoo ku dhaartey inuu xabad la dhici doono qaybaha kala duwan ee warbaahinta hadii aysan aysan u hogaansamin amaradiisa.
Dhinaca kale qaybaha kala duwan ee saxaafada ayaa ku tilmaamey ka maqnaanshaha shirka jaraa’id ee Madaxweynaha Puntland kadib markii Mudane Gaas iyo xafiiskiisa si joogta ah u diidaan in wax laga waydiiyo arrimaha siyaasada ee taagan mar walba iyo shirarka uu kaga soo qayb galo koonfurta Somaliya.
Xirnaanshaha Idaacada Daljir ayaa waxaa cambaareyn u soo jeediyey dhamaan ururada iyo hay’adaha u dooda Xuquuda saxaafada kuwasoo xukuumada Puntland uga dalbadey iney degdeg u furto warbaahintaas.